बल्ल कोरना भाइरसको औषधि चीनले नै पत्ता लगायो ! सेयर गरौ « Online Tv Nepal
बल्ल कोरना भाइरसको औषधि चीनले नै पत्ता लगायो ! सेयर गरौ
Published :6March, 2020 7:51 pm
चीनको हुबेई प्रान्तस्थित वुहान शहरमा निमोनियाको प्रकोप देखिएको थियो । पछी उक्त प्रकोपलाई नोवेल कोरोना भाइरसको श्रेय दिईयो, जुन अहिले चीनसहित विभिन्न देशहरूमा फैलिएको छ ।
यो जनावरबाट सर्ने एक प्रकारको भाइरस हो। तर नयाँ भाइरस मानिसबाट मानिसमा सरेको पनि पुष्टि भएको छ चीनमा । अहिले संक्रमण फैलिएको भाइरस कोरोना समूहका अन्य भाइरसहरुसँग नमिल्ने भएकाले यसलाई २०१९ नोभेल कोरोना भाइरस नाम दिइएको छ। अनुमान गरिए अनुसार जनावरबाट नै नयाँ भाइरसको सुरुवात भएको भनिए पनि यही जनावर भनेर पत्ता लागिसकेको छैन। अरु भाइरसमा यही जनावरबाट सर्छ भनेर भन्ने गरेका छौँ तर यो नयाँ भएकाले भन्न सकिन्न।
चीनको मिलिट्री मेडिकल साइन्स एकेडेमीलाई ख’तरनाक भाइरसविरुद्धको कीट, औषधि र खोप बनाउने काममा सफलता मिलेको उदाहरण छ। यो एकेडेमीमा २६ विशेषज्ञ, ५० भन्दा धेरै वैज्ञानिक र ५०० भन्दा बढी अनुसन्धानकर्ता छन्। चीनले दाबी गरेको छ कि चाँडै यो खोप उपलब्ध हुनेछ र कोरोनाको आ’तंक अन्त्य हुनेछ।